Isa House, iimitha ezili-100 ukusuka elunxwemeni - I-Airbnb
Isa House, iimitha ezili-100 ukusuka elunxwemeni
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguMaria
Iindawo ezinkulu zangaphandle, i-barbecue, ithuba lokutya kwindawo yangaphandle, indawo yokupaka ngaphakathi kwepropati, uxhumano lwe-wi-fi, inkqubo ye-alamu.
ILa Casa di Isa yindlu ezimeleyo ehlala eSan Lorenzo kwisitalato sesithathu, iimitha ezili-100 ukusuka elunxwemeni naselwandle.
Ibandakanya indawo enkulu yokuhlala esebenza njengegumbi lokutyela kunye negumbi lokuhlala, ikhitshi, amagumbi okuhlambela amabini agcweleyo aneshawa, amagumbi okulala amathathu (amagumbi amabini aphindwe kabini kunye nelinye elinye) kunye negumbi lokugcina elikumgangatho omnye.
Ijikelezwe yindawo enkulu yangaphandle. Emnyango kukho indawo yokumisa iimoto ezimbini kakuhle. Iveranda, ephambi kokufikelela kwindlu, igcwele ifenitshala yangaphandle enekona yencoko, iambrela enkulu, isitulo esishukumayo. Ngasemva kwendlu kukho i-patio apho unokuhlala ngaphandle, udle isidlo sasemini, wenze i-barbecue okanye ukutshisa ilanga. Kukwakho neshawari zangaphandle ezimbini eziza kusetyenziswa xa ubuya elwandle.
Izinto eziluncedo zendlu zigqityiwe. Ikhitshi, ene-oveni yombane kunye ne-microwave, ixhotyiswe ngezitya, iiglasi kunye nezitya. Umatshini wokuhlamba, i-ayina kunye nebhodi yoku-ayina, isixhobo sokomisa iinwele kunye ne-TV ziyafumaneka.
Indlu ine-air-conditioning ngokupheleleyo. Uqhagamshelo lwe-intanethi ye-Wi-fi kunye nenkqubo ye-alam igqibezela indawo.
Malunga neemitha ezingama-500 ukusuka endlwini kukho imakethi encinci yexesha lonyaka, kanye emva kokusekwa kwendawo yokuhlambela ngaphakathi kwivenkile yokutyela yepizzeria.
Elunxwemeni kukho i-kiosk-bar, indawo yokuphumla. Iikhilomitha ezi-3, imizuzu emi-5 ngemoto, yiMarzamemi, indawo entle yabakhenkethi ene-piazza Regina Margherita kunye neendawo eziyingqongileyo ezibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokukhetha iibha, iivenkile zokutyela kunye neevenkile eziqhelekileyo.
Umgama oziikhilomitha ezi-4 kukho iPachino, idolophu ekufutshane enikezela zonke iinkonzo.
Kwi-8 km kukho i-Portopalo di Capo Passero, idolophu yokugqibela yase-Italy kunye neelwandle ezintle zoLwandle lweMeditera, zikhululekile okanye zixhotyiswe.
IVendicari Natural Heritage Oasis kunye neCalamosche Beach inokufikelelwa ngemoto ngemizuzu emihlanu. I-Noto, isixeko esihle se-baroque, i-15 km ukusuka, kumgama weekhilomitha ezingama-45 kukho iSiracusa, ikomkhulu lephondo. I-Catania ikumgama weekhilomitha ezili-100, i-Etna i-130 km.
Ngokulinganayo ngokulula, malunga nemizuzu engama-30/40 ngemoto, ufikelela kwiphondo laseRagusa, kunye neendawo ezintle zaseModica, Scicli naseRagusa Ibla.
Kukho okongeziweyo, akukho sinyanzelo, i-euro eyi-15 ngomntu ngamnye ekuboneleleni kokuqala kweelinen (iilinen kunye neetawuli ezintathu zokuhlambela).
Ukusetyenziswa kombane kubalwa ngezixhobo zokubala kwaye kuhlawuliswe ngexabiso leesenti ezingama-30 ngekwh nganye.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- San Lorenzo